Warar - Mashiinka Maskaxda Galleyda
Mehold Mill galley
Mashiinka Mindhida, oo ah mashruuc lagu horumarinayo aadanaha, burka galleyda ayaa dadka korisa waxna u tartaa. Mashiinka Burka Galleyda ayaa si deg deg ah ugu horumaraya wadamada horumaray beeraha, waxaan soo saareynaa mashiinka mashiinka lagu beero galleyda mudo ku dhow 10 sano laga soo bilaabo sanadkii 2008. Bulshadu hada waa mid aad u tartameysa Waxaan ka soo saarnaa mashiinka bur galleyda laga bilaabo min yar oo 5 tan maalintii ah ilaa Gawaarida Gawaarida Galeyda ee Full-auto 500 TPD. Awoodda weyn ee qaabeynta sare, laxiriira heerka soosaarida daqiiqda ugu dambeysa iyo tayada bur.
Mashiinka Qodista Galleyda
Tehold, Afrika waxay la mid tahay waddankii labaad, oo ay ugu wacan yihiin macaamiisha halkaas joogta. Kenya gudaheeda, 90% dadka waxay cunaan cunnida galleyda cad sida cunnadooda caadiga ah "Ugali", daqiiqda waxaa lagu iibiyaa 1 kg ama 2 kg jawaan, bale kasta wuxuu leeyahay 12 jawaan inta Yuganda joogta, dadku waxay jecelyihiin bur aad u fiican. : waxay soo saari kartaa badeecooyin kala duwan oo kama dambeys ah oo daboolaya shuruudaha macaamiisha .Habkeenna loogu talagalay mashiinka wax lagu shiidayo galleyda, waxaannu qaadannaa qashin-qadaha si uu u xusho jeermiga hadhuudhka ah ee qaybta nadiifinta, isla markaana u kala shaandheeyo hubinta heerka bur. waa jeermiska galleyda iyo buunshaha Burka galleyda ah iyo cuntada galleyda ah mararka qaar waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo quraac badar ah,halka jeermiga hadhuudhka loo dooran karo samaynta saliida iyo buunshaha samaynta xoolaha.
Markaad qorsheyneyso inaad maal gashato warshadda burka, fadlan samee baaritaanka suuqa aasaasiga ah, sida hadhuudhka ceyriinka ah iyo badeecada ugu dambeysa ee suuqa maxalliga ah, haddii aad tixgeliso dhoofinta, ha ilaawin dadku waxay jecel yihiin inay ku cunaan halkaas. Haddii aad u baahan tahay wax taageero ah, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto.